I-Albertario - Igumbi eliqaqambileyo elinekhitshi ne-balcony - I-Airbnb
I-Albertario - Igumbi eliqaqambileyo elinekhitshi ne-balcony
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguAlessandro
Igumbi lestudiyo eliqaqambileyo nelibanzi elikumgangatho wokuqala wesakhiwo, lilungele ixesha elifutshane nelide, kumbindi wakudala we-Acquaviva delle Fonti. Ukufikeleleka ngokulula ukusuka kumbindi wedolophu, ilitye ukusuka kwindawo yokumisa ibhasi yesibhedlele saseMiulli kunye neBari. Ixhotyiswe ngekhitshi ene-induction hob, ifriji, igumbi lokuhlambela labucala kwigumbi, umoya womoya kunye neWi-Fi yasimahla.
IKhowudi yeSakhiwo sokuchonga (CIS) BA07200162000018556
Ineefestile ezimbini ezinkulu ezivumela ukukhanya kwendalo okugqwesileyo kumagumbi. Igumbi lixhotyiswe nge-TV ye-32, ikhitshi ene-induction hob, isinki kunye nefriji, kunye neembiza kunye neepani, eziluncedo kwiindawo zokuhlala ezide. Eli gumbi lixhotyiswe ngewodrophu, ibhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela labucala elineshawa.
Imo engqongileyo inenkqubo yokufudumeza kunye neyomoya.
I-studio igutyungelwe ngokupheleleyo yi-fiber optic ye-Wi-Fi yoqhagamshelo, ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno zabathengi, zombini ngenxa yezizathu zoshishino kwaye ungaphuthelwa uchungechunge lweTV oluthandwa kakhulu!
Inombolo yomthetho: BA07200162000018556